Khaobaadi 1680 days ago
ne0 1679 days ago
Khaobaadi 1678 days ago
Geology Tiger 1678 days ago
whatajoke 1677 days ago
Khaobaadi 1677 days ago
whatajoke 1676 days ago
Nas 1676 days ago
manmeronepali 1674 days ago
Visitor from DE is reading Nepalese radio hit song, from this year or from 2008
[VIEWED 630230 TIMES]
Posted on 04-26-16 5:37 PM [Snapshot: 19839] Reply [Subscribe]
निओ ब्रो ! हजुरलाइ साँची नै बर्नी बुढोको ट्याक्स प्लान राम्रो लागेको ? उहाको ट्याक्स प्लान त् "ड्राकोनियेन" छ निओ ब्रो ! स्पेसल्ली हाई इनकमवालाहरुको लागि ! तर किन पनि नहोस् त् ? साला बर्नी बुढो, गधा सोसियलिस्ट (कमीउनिस्ट) भातमारा त् पर्नु भो ! यो साला सोसिअलिस्टहरुको वान अफ द मागजिम्स भनेको नै "रिडिस्त्रीबिउसन अफ वेल्थ" हो ! दिज सोसिअलिस्टस वान्ट्स टु रब पिटर टु पुट पल अँन द वेल्फियेर ! तेही भएर हो यो भातमारा बर्नीले तेत्रो ट्याक्स लगाको !
निओ ब्रो ! म त् छक्क पर्छु ! हजुर, जीइओलोजी टाइगर ब्रोहरु बर्नीको पिछे मरी हत्ते गर्न भाकोले ! अब बिट्टू ब्रोको त् झन् कुरै नगरम ! त्यो क्रिमिनल माफिया क्लिन्टनजस्तो कुक्कुरनीको सपोर्ट कुन चै सिधा दिमागले गर्न भएको होला भनेर ....
हजुर त् आफै क्याप्तलिज्म राम्ररी बुझ्न भाको अर्थ शास्त्री ! तर किन सोसियलिस्ट हुन् भाको, मैले बुझ्न सकिन ! मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुर, जीइओलोजी टाइगर ब्रोहरु जस्तो मान्छे, हृदयको एक दम असल मान्छे हुन् ! अनि तेस्तो मान्छेको सोच पनि सबैलाई मदत गरम, अमेरिकामा जो पनि बोडर क्रस गरेर आउञ्छन उनीहरुलाइ स्वागत गर्नु पर्छ, मानवताको नाताले आदि जस्तो भावनात्मक कुरामा पर्नु हुन्छ ! अनि बर्नी जस्तो बाजे आएर तपाईहरुको इछ्या पुरा गरिदिन्छु भनेर मिठो मिठो शब्दजाल फ़ैलाउञ्छन ! तर त्यो सबलाइ सित्तैमा त् दिन सक्दैन नि ! देर इज नो फ्री लन्च ! अनि हो... बर्नी जस्तो सोसिअलिस्टले अलिकति गरि खाकोहरुलाइ ट्याक्सको झट्टारो हानेर, उनीहरुको कमाई लुटेर अरुलाइ सित्तैमा बाँदछन् ! बर्नीको ट्याक्स प्लान लागु गर्यो भने यो देशमा "जब क्रिएसन" हुन्न ! तर ट्रंपको लो ट्याक्स प्लानले यो देशमा जब क्रिएसनलाइ पूर्ण रुपले हौसला दिने छ ! अनि उहाको अनुसार लो ट्याक्स रिसिब गर्न कोर्पोरेसनहरुले यो देशमाइ जब क्रियेत गर्न पर्छ ! विदेशमा गर्यो भने उनीहरुले धेरै नै ट्याक्स तिर्न पर्ने हुन्छ !
सोसिअलिज्मलाइ सपोर्ट गर्नु भनेको बिग गभर्नमेन्टलाइ सपोर्ट गर्नु हो ! अमेरिकाको मूल आधार नै स्मल गभर्नमेन्ट र इन्दिभिजुअलिज्म हो ! जब कोइ सरकारी ह्यान्डआउटमा डिपेन्ड हुन्छ उ सरकारको दास हुन्छ ! त्रु क्यापतालिज्ममा सरकारको भूमिका कम भन्दा कम हुन् पर्छ ! तर दुर्भाग्यवस अहिलेको अमेरिकामा "क्रोनि क्याप्तलिज्म" छ ! सरकार, कोर्पोरेसनको रखेल भएको छ ! कोर्पोरेसनले देमोक्य्रट्स र रिपब्लिकनका सब नेताहरु किनेका छन् ! देमोक्र्यट्सलाइ कोर्पोरेट वेलफेर स्टेट फैलाउन मदत गरेको छ भने रिपब्लिकनलाइ वारफियेर स्टेट मेन्टेन गर्न मदत गर्छन ! दुवै पाटा येउतै कोर्पोरेट सिक्काका हुन् ! दुवै पार्टीले "कोर्पोरेट स्ट्याटस कुओ" लाइ नै मेन्टेन गर्ने मात्र हो !
हो यो इलेक्सनमा बर्नी बुढो एन्टीइस्ताब्लिश्मेंट क्यन्दिडेट हुन्, ट्रंप जस्तै ! तर निओ ब्रो सोसियालिज्म जस्त वोंट वोर्क के ! हजुरले समाजबादीहरुको इतिहास हेर्ने भाको छ त् ! भेनेजुएला लाटिन अमेरिकाको टप सोसियलिस्ट देश थियो तर आज हेर्नुस त् मदुरोले त्यो देशको के गति गरि छाड्यो ? उसको सबै थोक फ्री पोलिसीले त्यो देशलाइ दल दलमा दिन प्रतिदिन डुबाएको छ ! निओ ब्रो ...हजुरजस्तो बर्नी र बिट्टू ब्रो जस्तो क्लिन्टन सपोर्टरहरुले पनि यो हाम्रो प्यारो अमेरिकालाइ तेही तिर धकाल्दै हुनुहुन्छ !
तेसैले म हजुर र बिट्टू ब्रोलाइ हाम्रो प्यारो ट्रंपलाइ नै सपोर्ट गर्न हुन् बिनम्र आग्रह गर्दछु ! हो हाम्रो प्यारो ट्रंप मिस्टर पर्फेक्ट हुनुहुन्न तर त्यो बर्नी र क्लिन्टनले भन्दा यो देशलाइ सहि बाटो तिर लाने छ र अमेरिकालाइ साँचीनै "ग्रेट" बनाउन हुने छ ! ल म येही धागो बाट यो पनि प्रस्ताब राख्दै छु ! येदि हजुरले र बिट्टू ब्रोले ट्रंपलाइ भोट खसाल्न भो भने म दुवैलाइ ... ज्यादा त् दिन सक्दिन .. तर एक एक सय दल्लरको चेक पठाईदिन्छु ! लु भद्र सहमति गर्ने हो निओ, बिट्टू ब्रो ?
Posted on 04-28-16 6:22 PM [Snapshot: 20242] Reply [Subscribe]
"बर्नी को पुरा सोसियालिज्म होइन नि देमोक्रतिक सोसियालिज्म"
मेरो प्यारो निओ ब्रो ! बर्नी बुढोको डेमोक्र्याटिक सोसिअलिज्म र "पुरा सोसिअलिज्म" भनेको हात्ती र हात्ती छाप चप्पल सरह नै हो ब्रो ! तर डेमोक्र्याटिक सोसिअलिज्ममा त् झन् ..भन्छन नि .. "देर इज अ मेठोड टू द म्याडनेस" ! मेरो विचारमा डेमोक्र्याटिक सोसिअलिज्म भनेको "टू वुल्भ्स एण्ड अ शिप भोटिंग फर अ डिनर " हो !
हजुरले टाँस्नु भाको कमेन्ट नि पढे ! पहिलो कमेंटर र मेरो बिचार ठ्याक्कै मिल्छ ! हजुरको त् पक्कै पनि दोस्रो कमेंटरको झैँ आइडियोलोजी हो ! निओ ब्रो.. हजुर र मेरो आइडियोलोजी डायागनल्ली अपोजीट छ ! हजुरसंग कुरै मिल्दैन भने ! हजुर बिग गभर्नमेन्टको पक्षमा, म स्मल गभर्नमेन्टको पक्षमा !
निओ ब्रो, अमेरिकाको इकानमी मेस हुनुमा ९९% हात फेडेरल रिजर्भ ब्यांकको छ ! जुन प्राइभेत्लि ओन्ड सेन्ट्रल ब्यांक हो ! येदि साँचोरुपमा यो देशको लो र मिडल क्लासलाइ मदत गर्ने हो भने फेडलाइ अबॉलिष गर्ने पर्छ ! डाक्टर रन पलले २००९ मा एच.आर १२०७ "अडिट द फेड" बिल इन्त्रोदिउस गर्नु भाको थियो ! त्यो बिलले पूर्णरुपले फेडलाइ अडिट गर्ने थियो ! डाक्टर पलले बर्नी बुढोसंग मिलेर काम गर्नु भाको थियो ! तर पछि खाते भुसिया कुक्कुर बर्नीले डाक्टर पललाइ धोखा दिएर, साला हि सोल्ड आउट टू द बेंकर्स एण्ड इन्त्रोदिउस्द "वाटर्र्ड डाउन भर्सन" अफ द् बिल व्हिच गेभ मोर पावोर टू द् फेड ! मलाई त् त्यो २००९ देखि यो खाते कुक्कुरसंग रिस उठेको हो ब्रो ! यो चोर अहिले चै खुब एन्टी-इस्ताब्लिश्मेंट भै पल्टेको छ ! यो बुढो एक दम फ्रौड हो ! अहिले भर्खर २०१६मा बर्नीलाइ चिनेकाहरुले बर्नीको असली रुप चिनेकै छैन निओ ब्रो ! हजुर पनि ठुलो भ्रममा हुनुहुन्छ !
"On May 6, 2010 Bernie Sanders sold out to the bankers by modifying his amendment to the extent that it would allow the Fed to keep many of its activities secret. On May 11, 2010 the Sanders amendment passed the Senate byaunanimous 96-0 vote."
माथिको भिडियोको कमेन्ट सेक्सनबाट लिएको केहि कमेन्ट हजुर नि पढ्नुस प्लिज !
"Sanders doesn't lead with example.﻿"
"Bullshit Bernie addedabunch of bullshit to the bill and it got killed. ﻿"
"I used to be hopeful about Bernie. I never saw him asareal socialist's Socialist - but an advance. I called him the pick of the litter. Then I began to see the bullshit and the waffling. Most of his supporters are too desperate to allow themselves to see the inconsistencies and his self-sabotaging. His wife brought Burlington College to the verge of financial ruin. The RCC bailed her out and she left in disgrace. I guess Democratic Socialist means: the token Socialist of the Democratic party dragged out to net fresh, young meat for the party.﻿"
"Bernie Sanders also voted for the Freedom act. He'safraud"
"so much for being against the big banks.﻿"
Posted on 04-29-16 10:41 AM [Snapshot: 20371] Reply [Subscribe]
जिओलोजी टाइगर ब्रो ? के ब्रो नि खाते समाजबादी बर्नी झैँ "हेल्थ किएर" लाइ अधिकार मान्न हुन्छ ? येदि मान्न हुन्छ भने .. मेरो बिचारमा सबैले निशुल्क खान पाउनु पर्ने पनि अधिकार लागु गर्नु पर्यो, सबलाई निशुल्क घरको पनि व्यवस्था सरकारले नै गर्न पर्यो ! यी त् आधारभुत आवस्यकता होनी होइन र ?
डाक्टर र्यंद पौलले कस्तो राम्रो जवाब दिन भाको छ ! एक चोटी फेरी सबले अमेरिकामा फ़ाउन्दिङ्ग डकिउमेन्ट पढ्ने पर्ने अवस्था आको छ !
तेस्मा लेखेको छैन कि हामीलाई फ्री एजुकेसन, हेल्थ किएर, हाउसिङ्ग, जब, फूडिंगको अधिकार छ भनेर ! तेस्तो अधिकार त् साला खाली काम नगरी बसेर अर्काले मरी मेटेर कमाको पैसालाई ट्याक्स गरेर आफ्नो पेट पाल्ने खाते थर्ड वर्ल्डका इमिग्रेन्टलाइ चाहिएको छ ! यो साला भातमारा बर्नीले आजको पिढीलाइ फ्री ह्याँदाउटस्को नाराले सबको दिमागमा कमिउनिज्मको आइडिया भर्दै छ !
जिओलोजी टाइगर ब्रो, निओ ब्रो ... अँ उता बोर्डर तिर हजुरको बर्नी सपोर्टरहरुको घुइचो लागेको रहेछ ! स्वागत गर्न जान हुन्छ कि ?
Posted on 04-30-16 2:58 PM [Snapshot: 20556] Reply [Subscribe]
थुक्क चोर गधा भातमारा पाजी भुसिया खाते कुत्ता लिबरल डेमोक्र्यट्स ... साला बेश्याका भाते ! थुक्क थुक्क थुक्क !
Posted on 04-30-16 9:24 PM [Snapshot: 20616] Reply [Subscribe]
खाते कुक्कुर देमोक्र्यट्सहरुको असली इतिहास दिनेशको आउँदो डाक्युमेन्ट्री "हिलरी'ज अमेरिका" मा राम्ररी दर्शाएको छ ! जुलाई २०१६ मा थिएटरमा रिलिज हुँदै छ ! नबिर्सिकन हेर्न जानु है व्हटअजोक ब्रो !
Last edited: 30-Apr-16 09:24 PM
Posted on 05-02-16 10:50 AM [Snapshot: 20965] Reply [Subscribe]
रांड कपुत ओबामा ! एस्लाई त् गालि गर्दा गर्दा मेरो घिच्रोमा गोलगांठ नै पलाईसक्यो होला ! थुक्क बेस्यका !
साले खाते चोर गधा भाते देमोक्र्यट्स बर्नी, हिलरी सपोर्टरहरु ! तिमीहरुको चै कनडोमा ९९% ट्याक्स लगाउन पार्छ, तिमिहरका बोर्डर क्रस गरेर आउने नाजायज सन्तान पाल्न ! थुक्क कमिउनिस्टहरु !
Posted on 05-02-16 5:44 PM [Snapshot: 21045] Reply [Subscribe]
बर्नी कुक्कुरका नजयाज छाउरा छाउरीहरु !